१४ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि, वृद्धि हुनेमा अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनी
जेठ २७, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार १४ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएको छ ।
यो दिन १४ ओटा कम्पनीमध्ये अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको शेयरमूल्य बढेको छ । १४ ओटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी पाँचथर पावर कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३८५ पुगेको हो ।
त्यसैगरी लिवर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९७ प्रतिशत,शिवश्री हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ९७ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावरको ९ दशमलव ९३ प्रतिशत,माउण्टेन इनर्जीको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत,छ्याङदी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ९१ प्रतिशत,रिडी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ९० प्रतिशत,बरुण हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरी पोखरा फाइनान्सको ९ दशमलव ८६ प्रतिशत,सीईडीबी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ८५ प्रतिशत,अरुण भ्यालीको ९ दशमलव ८१ प्रतिशत,घलेम्दी हाइड्रोका ९ दशमलव ७९ प्रतिशत,जोशी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ७३ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ९ दशमलव ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
ती १४ ओटै कम्पनीको शेयर विक्री गर्नेभन्दा खरीद गर्ने लगानीकर्ता धेरै भएकाले शेयरमूल्यमा वृद्धि भएको हो । ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.२ हजार ९८०, जोशी हाइड्रोपावरको रू. २८२ र अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य रू. ५२६ पुगेको हो ।
त्यसैगरी सिईडिबी हाइड्रोपावरको रू. ५०२, पोखरा फाइनान्सको रू. ७१३,बरुण हाइड्रोपावरको रू. ५९०,रिडी हाइड्रोपावरको रू. ६३३,छ्याङदी हाइड्रोपावरको रू. ४७७,माउण्टेन इनर्जीको रू.८६४,ङादी ग्रुप पावरको रू.४६५,शिवश्री हाइड्रोको रू. ३५३ र लिवर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.४१९ पुगेको छ ।
अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको शेयरमूल्यमा वृद्धि भएसँगै उक्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी २ दशमलव ९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम शेयरमूल्य भएका कम्पनीहरुको परेको देखिएको छ ।